Muxuu ka yiri Zidane kaddib markii la weydiiyay sababta uu Bale ugu diiday fursad uu ku macsalaameeyo taageerayaasha Real Madrid? – Gool FM
(Spain) 19 Maajo 2019.Tababaraha kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa marmarsi u sameeyay go’aankii uu kursiga keydka ku fariisiyay xidiga reer Weles ee Gareth Bale kursiga keydka, kulankoodii ugu dambeeyay horyaalka La Liga xili ciyaareedkan ay maanta guuldaro 2-0 ah ay kala kulmeen Real Betis.
Waxay ahayd in Bale ugu yaraan uu dhameysto kulankiisii ugu dambeeyay ee Real Madrid, maadaama ay u badan tahay in suuqa xagaaga uu ka dhaqaaqi doono garoonka Santiago Bernabeu.
Laakiin macalinka reer France ee Zinedine Zidane ayaa kahor istaagay fursadii uu ku macsalaameyn lahaa maanta jamaahiirta garoonka Santiago Bernabeu, maadaama inta ay ciyaarta socotay uu ku dhameystay kursiga keydka, sidoo kale wuxuusan ciyaarin labadii kulan ee lasoo dhaafay.
Zidane waxa uu carabka ku adkeeyay in arrintani aysan ahayn mid shakhsi ahaan ku saabsan Bale, laakiin ay tahay go’aan aragti ahaan ah farsamo, isagoo xusay inuu gaaray go’aan haboon isla markaana faa’iido u leh kooxda.
“Ma aqaano hadii uu yahay kulankii ugu dambeeyay ee Gareth Bale, aan aragno waxa dhici doona”.
“Maalmihii ugu dambeeyay waxaan heystay ciyaartoyda kale, waxaan go’aansadey inaan isbedel sameeyo, xilli ciyaareedka soo socda wax kasta ayaa dhici kara, ma uusan ciyaarin Gareth Bale kulanka Maanta, sababtoo ah waxaa jiray ciyaartoy kale ee ciyaaray”.
Intaas kaddib Zidane ayaa la weydiiyay sababta uu Bale u sii weyn waayay ciyaarta maanta fursad uu ku macsalaameeyo taageerayaasha garoonka Santiago Bernabeu, wuxuuna yiri:
“Taasi waa run, ma uusan helin wax fursad ah, waan ka xumahay, laakiin qofna ma oga waxa dhici doono, fiiri waxyaabaha maalin walba taagan, markaan arko wax aanan jecleynsan, waa inaan go’aan u gaaro qaabka aan u arko inay ku haboon tahay”
“Ma jirto cid iska indho tiri karta waxa uu Gareth Bale horey kaga sameeyay kooxda Real Madrid, balse tababare ahaan waa inaan ku noolaado wakhtigan”.